Man City oo ku dhow inay qandaraaska u kordhiso mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah – Gool FM
Man City oo ku dhow inay qandaraaska u kordhiso mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah
(Manchester) 09 Okt 2020. Wargeyska “The Times” ee dalka England ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Manchester City ay ku dhowdahay inay qandaraaska u kordhiso xiddiga reer Belgium ee Kevin De Bruyne, si uu ula sii joogo muddo dheer.
Kooxda Manchester City ayaa la soo saxiixatay Kevin De Bruyne xagaagii 2015, isagoo kaga soo biiray naadiga reer Germany ee Wolfsburg adduun lacageed dhan 76 million euros.
Intaas kaddib, Kevin De Bruyne wuxuu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan uguna fiican ee kooxda Manchester City iyo Yurub oo dhan, iyadoo ay ugu wacan tahay qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa ee khadka dhexe uu ka sameeyay, isagoo dhaliyay goolal badan, isla markaana caawiyay kuwo kale.
Inkastoo qandaraaska 29 jirkan ee Manchester City uu dhacayo xagaaga 2023, hadana maamulka kooxda reer England ayaa doonaya in ay sii haystaan ​​xiddiga wakhti dheer.
Wargeyska ayaa intaas ku daray in kooxda ay dooneyso inay qandaraaska u kordhiso Kevin De Bruyne muddo shan sano ah ilaa xagaaga 2025.
Wargeyska “The Times” ayaa sheegay in Kevin De Bruyne uu ku faraxsan yahay joogitaankiisa kooxda Manchester City, isla markaana uu doonayo inuu mustaqbalkiisa kubadda cagta ku soo gabagabeeyo naadiga sky blue.
Suárez oo ka waxbixiyay dhibaatadii uu kala kulmay Barcelona, xilli sidoo kale uu ka hadlay Lionel Messi
RASMI: Tababaraha ku guuleystay abaal-marinta macalinka bisha September ee Premier League oo lagu dhawaaqay